चुनावका अपेक्षा, प्रतीक्षा र उपेक्षा
तीनवटा प्रदेशमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकतिहाई जति विजित नेता र कार्यकर्ताका घरमा खुशी छाएको छ । जेठमै दशैँ आएको छ । राँगा, बङ्गुर, खसी र कुखुराको ज्यान र मदिरा भलसरी बगेको छ । तिनैले त आसपासका छिमेकी र पराजितलाई उत्तेजित पारेका छन् । पख्लास् भनाउँछन्, पाखुरा सुर्काउँछन् ।
अर्कोतिर दुईतिहाई जति पराजितका घरमा रुवावासी चलेको छ । तिनीहरूका घरबाट खुशी मनाउनेतिर फर्केर धारेहात लगाएर भट्टेश्रापको वर्षा भइरहेको छ यतिबेला । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि हुने कुरा त्यही हो । जित्ने डुक्रनु र हार्ने लत्रनु स्वाभाविकै हो । जित्नेको शान र अभिमानले हार्नेको मान–सम्मानमा आँच नआओस्, क्षति नपु¥याओस्, अपमान नगरोस् भन्नेतिर समुचित ध्यान दिन सकिएन भने लोकतन्त्र आफैँ लज्जित हुनेछ । चुनावले मनमुटाव बढाउनेछ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नजानिँदो तरिकाले भित्रभित्रै डढाउने छ, सडाउने छ ।
चुनावका बेला जसले जति सक्यो, उति बक्यो, खोक्यो । पत्याउनेले साथ दियो, नपत्याउनेले दिएन । नदिनेसँग बदलाको भावना लिन भएन । नहुने र नसक्ने कुरा पनि पूरा गर्ने वाचा गरिन्छ चुनावमा । नर्कलाई स्वर्ग बनाउने सपना देखाइन्छ । राक्षसलाई देवता बनाइदिने कसम खाइन्छ, खुवाइन्छ । यो भूतलका सबै सुविधा उपलब्ध गराउने कुरामा कुनै द्विविधा नराखी प्रतिबद्धता जारी गरिन्छ । त्यसैले भनिन्छ समाजमा – ‘चुनावका बेलामा गरेका कुरा पनि कसले पूरा गर्छ र ? गर्दैन । जुवाका खालमा दिएको कर्जा पनि कसले तिर्छ र ? तिर्दैन । मदिराको नसाले गलेका र ढलेका बेला गरेका काममा बापत् लाग्दैन । ’ आश गर्नेले पनि उतिसाह्रो भर चाहिँ पर्दैन । अपेक्षा ठूला देखाएर प्रतीक्षा गराएर उपेक्षा गर्ने परिपाटीको अन्त्य होस् भन्ने कामना गरौँ अब ।
सबैको चुनावी प्रतिबद्धता पत्र भनेको सकेसम्मका राम्रा योजना र शब्द छानेर, कलात्मक तरिकाले उनेर, मन छुने जाल बुनेर माछा मार्नु वा त्यही जालमा मान्छे पार्नु हो । जो परे, परे । पाँच वर्षका लागि हो यो । अर्कोपल्ट के हुन्छ, हुन्न, कसैलाई थाहा छैन । २० वर्षपछि पालो आएको हो बल्ल । यस्तो अनियमिताका बीचमा नियमिताको कुनै टुङ्गो छैन । संविधान र व्यवस्थाको प्रयोगशाला बनेको नेपालमा यसपल्टदेखि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रका लागि किसिम किसिमका अधिकार, व्यवस्थापन र नवसंरचनाको प्रयोग गरिँदैछ । कुनै आकस्मिक र अकल्पनीय दुर्घटना नभए ७६६ वटा स्थानीय तह र सातै प्रदेशको स्वाद चाखिने छ । तर हुने चाहिँ के होला, अन्योल नै छ । नाम बदल्ने, काम यथावत राख्ने चलन दोहोरिने छ फेरि पनि । पञ्चायतसहित त्यसपछि लगातार बदलिएका सबै व्यवस्था र अवस्थाले भोगाएको भोगाई आफैँ सम्झे हुन्छ । अरूलाई सोध्न जानै पर्दैन । धेरै अपेक्षा राखेर, व्यग्र प्रतीक्षा गरेर, आशातीत सफलता पाउन नसकेर, उपेक्षा भोगेको अनुभव गर्नुपर्दा गहिरो चोट लाग्छ र पहिरो लैजानका लागि खोट खोज्न थालिन्छ । भोलि खोट खोज्दै हिँड्नुभन्दा आजै नखोज्ने बाटो लिइयो भने सहज हुन्छ । पीरको पोको बोकेर वल्लो घाट र पल्लो तीर चहार्न पर्दैन ।
सोलारसिटी, स्मार्टसिटी, बिजुली, रेल र कसैले तेलको भेल बगाउने कुरा गरेका छन् । कृषि र औद्योगिक क्रान्ति त छुटेकै छैनन् । विदेश पलायन भएको श्रमशक्ति यतै सदुपयोग गर्ने योजना पनि सुनाएकै छन् । सिंहदरबारको सत्ता गाउँसम्म पु¥याइएको पनि भन्छन् । तिनको आफ्नै शक्ति र क्षमता कति छ भन्ने थाहा छ सबैलाई । आजसम्म पु¥याउन र गर्न केले रोकेको थियो रे, र अब के गरेर ल्याउने हुन् ? छेक्ने को थिए र ती कता लागे वा भागे ? कोही कहीँ गएको र भएको केही छैन, हैन । हिजोका धामी र आजका झाँक्री दुवै उनै हुन् ! प्रणालीको नाम फेरिए पनि काम फेरिएको छैन । महिला, दलित र जनजातिको पहुँच अलिकति बढाइएको छ, फरक त्यत्ति हो ।
अब झन् चर्को कर र दस्तुर तिर्न पर्नेछ बरु । अप्रिय नलागोस् हनुमानहरूलाई, तिनका राम र सीताहरूलाई पाल्न झन् धेरै सकस पर्नेछ । गाविसबाट पालिकामा परिवर्तन हुँदा, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महा–नगरपालिका बन्दा र भन्दा कति फरक परेछ भनेर बुझ्न मन भए हिजोको मालपोत, कर वा तिरो बुझाएका रसिद लिएर जानुस् । आज कति लिन्छन्, माग्छन् र के भन्छन् आफैँ सुन्न, हेर्न र व्यहोर्न सकिन्छ । जनतालाई झन् बढी कर तिराउन र रहर भिराउन जानेकाले गरेका गफ जति हाम्रा लागि अग्रगामी विचार र सिद्धान्त रे !
मेरो पार्टीले जित्यो, तेरोले हा¥यो, तेरोले जित्यो, मेरोले हा¥यो भन्दै उत्तेजित भएर उर्लनु र कुर्लनु बेकार छ । दलका नेताहरू माथि कुम जोरेर जलपान गर्छन्, तलका कार्यकर्ता कुम ठोकेर दुश्मनी साँध्छन् । माथिका नेताले तलका जनतालाई आपसमा जुधाउन खेलेको खेल नबुझेर उफ्रनु त आफैँ कुप्रनु हो । ठेस लागेकै ठाउँमा बारम्बार ठक्कर लाग्छ । त्यसैले सतर्क भएर हिँड्नुपर्छ । धेरै मात्तिन, तात्तिन र आत्तिन पर्दैन । पद र पहुँचको भोक, नपाएको शोक र पाएपछिको झोकलाई ठेगान लगाउने सरल उपाय अपनाए हुन्छ ।
जसले जे भने पनि आफ्नो गाउँ ठाउँ आफैँ बनाउने हो । कस्तो बनाउने र भनाउने भनेर सहमति जुटाउने र टुटाउने पनि आफैँले हो । वरपरका छर–छिमेकीसित आपसमा मिलेर काम गरे बन्छ, नत्र बिग्रन्छ, भत्कन्छ । भत्काउन सिकाउने नेताले बनाउन जानेका हुँदैनन् । बनाउन जानेका श्रमजीवी किसान र मजदुरले बिगार्न जान्दैनन् । खुराफातको राजनीति पसेपछि घर, गाउँ र शहर बाँडिएको र भाँडिएकोमा चिन्तित छ सभ्य, सम्पन्न र सुसंस्कृत समाज । असभ्य हिंस्रक हुन्छन् । मांस, मदिरा, अप्सरा र धनमै मन लगाउँछन् । तमो गुणको लक्षण हो त्यो । जसले विध्वंश बाहेक अरू केही गर्दैन । निर्माणका लागि त निपूर्ण शक्ति चाहिन्छ । चुनावमा जितेकाले मात्र गर्ने, हार्नेले बिगार्ने वा बिगार्नुपर्ने खेल र झेल बेमेलका बान्की हुन् । बेमेलकै लागि उकास्नेहरू सहकार्यका विरोधी हुन् । प्रतिस्पर्धाका नाममा मुठभेड गराउनेभन्दा मेलमिलाप गराउन खोज्ने असली मित्र हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । लडाउन, भिडाउन र गिडाउनभन्दा मिलाउन र सँगै हिँडाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यस्तो गाह्रो काम गर्ने पनि छन् यही दुनियामा । चिनेर समुचित कदर गर्न सक्नुपर्छ ।
पहिलो चरणको चुनावमा चार जनाको ज्यान गयो । अर्बौ रकम खर्च भयो । दोस्रो चरणमा पनि हुन्छ । नवनिर्माण वा पुनःनिर्माणको बेला हो यो । त्यस्तै बलिदान र बजेटको खर्च नवनिर्माणमा गरिँदा के बन्थ्यो होला, गमौं । हामीकहाँ बनाउनभन्दा बझाउनमै समय, शक्ति र स्रोत खर्च गर्ने चलन बढेको छ । त्यसैले सोचेको र खोजेको हुन्न र नसोचेको र नखोजेको चाहिँ हुने गरेको छ । धेरै अपेक्षा नगरौँ । प्रतीक्षा पनि नगरौँ । खुरुखुरु आफ्नो रुचिअनुसारको उत्पादनमूलक काममा लागौँ । उपेक्षा गरेको अनुभवै हुन्न । आश गर्दागर्दै र भर पर्दापर्दै सास पनि जान्न । सर्वनाश पनि हुन्न । अनि कसैसँग रिसाउन, खुसाउन र ठुसाउन पनि पर्दैन ।